Mombamomba ny orinasa - Sun Master International Limited
Seza Ratsy Wicker
Latabatra fisakafoana latabatra fisakafoana
Asehoy ny efitrano VR
Entana sakafo sy zava-pisotro
Sun Master International Limiteddia orinasa manamboatra fanaka ivelany. Izahay dia tsy orinasa OEM fotsiny manana traikefa 20 taona mahery, fa ny orinasa mpamorona endrika vaovao kosa dia mandroso maodely mihoatra ny 30 isaky ny vanim-potoana. Nahay manokana ny wicker rattan, ny fanaka amin'ny tady ary ny fanaka vita amin'ny lamba vita amin'ny aliminioma sy ny fefy vy mifangaro amina karazan-pitaovana samihafa toy ny hazo plastika sy ny hazo teak.
Ny fahaizantsika avo indrindra dia fanaka 8 0000 isam-bolana miaraka amina mpiasa efa za-draharaha 300. Nahazo BSCI sy ISO 9 0 0 1: 2015 izahay hanolotra serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifantsika.
Nandritra ny folo taona dia nitantana ny mombamomba ny aluminium sy ny fanaka izahay. Nanafatra milina extruding izahay, milina fanodinana anodizing ary fitaovana hita maso avy amin'ny firenena mandroso hanome kalitao tsara indrindra. Ny fahaizantsika dia fanaka 80.000 isam-bolana. Miaraka amin'ny ezaky ny mpiasan'ny Sun Master sy ny tanjon'ny "Quality aloha, ny mpanjifa aloha", Sun Master dia hiara-hiasa amin'ireo namana eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny serivisy avo lenta sy mahomby.
Ny lehibentsika Terry dia naka toerana ambony isan-karazany amin'ny indostrian'ny mpanamboatra maro talohan'ny naha-CEO an'ny Sun Master International Ltd izay mpanamboatra fanaka ivelany sy famolavolana endrika mifantoka amin'ny trano fandraisam-bahiny, rendrarendra, patio, fampiasana fifanarahana. Teraka tany Hong Kong izy ary nifindra monina tany Canada tamin'ny taona 1988 izay lehibe tao Vancouver. Terry dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Victoria tao BC Canada ho an'ny Bachelor of Art izay nitondra azy fototra miaraka amin'ny fahatsapana ny famolavolana vokatra vaovao. Nanampy ny maro tamin'ny mpanjifany izy tamin'ny famolavolana sy ny famokarana maodely hatramin'ny 1500+ fanaka ivelany miaraka amin'ny 18 taona niasany tao Sina.
Ny fahatakarantsika ny famolavolana tsara dia midika hoe fampidirana ny hafaliana sy ny faharetana, ny fanaka rehetra ao amintsika dia ohatra tsara amin'ny fepetra takiana sy ny kalitao tsara indrindra mifanaraka amin'ny mpanjifanay. Niara-niasa tamin'ny orinasa 500 ambony izahay nandritra ny taona maro nifanesy ary ny tsena dia ny eropeana sy Etazonia indrindra.
Isan-taona dia namolavola endrika sy maodely vaovao hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifanay. Ny maodely manokana dia natao ho an'ny mpanjifa manana fifandraisana lavitra amintsika, izay mamela azy ireo ho lasa mpifaninana amin'ny tsena fanaka ivelany any amin'ny fireneny. Ny fampiroboroboana ny fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifanay sy ny mpividy no tanjonay. Ny paikadinay tsotra dia ny hitazonana ny tsy fivadihana sy ny hitsiny amin'ny vidiny hahazoana fitokisana.
Ny orinasa misy anay dia any Foshan City, Guangdong, Sina. Maharitra 40 minitra mankany amin'ny orinasa avy any amin'ny seranam-piaramanidina Guangzhou Baiyun. Raisina an-tsitrapo ianao hitsidika anay ary hahita ny tanànan'ny Guangzhou tsara tarehy. Faly kokoa izahay mandray anao any amin'ny orinasanay sy ny efitrano fampisehoana. Avelao izahay hamorona toerana ivelany tsara kokoa ho anao, ho ahy, ary ho an'izao tontolo izao.
No.1 XinCheng South Road, faritra indostrialy Leping, Sanshui, Foshan City, Provinsi Guangdong, PRChina
Fa maninona no misafidy fanaka an-kalamanjana Sunmaster?
Inona no tokony hojerentsika rehefa choosin ...
Tetikasan'ny trano fisakafoanana an'ny masoandro Master Master furnitur ...
Fanatodihana an-tsakany sy an-davany ny antsipirian'ny any ivelany ...
Fiainana mahafinaritra eo ivelan'ny habakabaka miaraka amin'ny F ...